Esi saziso sabucala ("Isaziso sangasese") sichaza indlela i-Changsha Sinocare Inc kunye neenkampani zayo kunye nabanxulumene nabo abadibanisa esi Saziso Sobumfihlo - isilawuli sedatha nganye - ("Sinocare, ”“ Our, ”“ us ”okanye“ we ”) sinokuqokelela, sisebenzise kwaye sabelane ngolwazi olunxulumene nawe njengomntu ochongiweyo okanye onokuchongwa wendalo (" Idatha yobuqu ").
Nceda ufunde sonke esi saziso sabucala ngononophelo ngaphambi kokusebenzisa iiwebhusayithi zethu, izaziso ze-imeyile, usetyenziso lweselfowuni, usetyenziso lweendaba zosasazo, iiwijethi, kunye nezinye iinkonzo zethu ezikwi-intanethi ("iiNkonzo") kuba ziya kukunceda uqonde ukuba yeyiphi idatha esiyiqokelelayo, indlela esiyisebenzisa kunye yabelana ngayo, kwaye zeziphi izinto ozikhethayo malunga nedatha.
Ukuba ufuna ukusebenzisa amalungelo akho obumfihlo njengoko kuchaziwe apha ngezantsi okanye unemibuzo malunga nesi Saziso Sobumfihlo, iinkcukacha zethu zonxibelelwano zilandelayo:
Ingqalelo: UMlawuli woKhuseleko lweDatha
umnxeba: + 86 175 0843 8176
Intoni'isapphi:+ 86 175 0843 8176
Iinkonzo ze SinocareIinkampani ezincedisayo kunye neenkampani ezisebenzisanayo nganye yeyabanini, ziqhutywa kwaye zibonelelwa zezi nkampani kunye neenkampani. Ndiyacela Cofa apha Uluhlu lwe SinocareIinkxaso-mali kunye namahlakani. Nangona kunjalo, esi Saziso saBucala siLawula ukusetyenziswa kwefayile ye- Sinocare Iinkonzo zenkampani eziqhagamshela ngokuthe ngqo esi Saziso Sobucala. Ukusebenzisa kwakho iimveliso ezithile okanye iinkonzo zinokuxhomekeka kwizaziso zabucala ezongezelelweyo. Okunye Sinocare Iinkonzo zenkampani zinokunxibelelana okanye kungenjalo zibonelele ngesaziso sabo esahlukileyo.
Izenzo zethu zabucala zinokwahluka ngokwamazwe esisebenza kuwo ukubonisa iinkqubo zalapha ekhaya kunye neemfuno zomthetho.
Ukuqokelelwa kweDatha yobuqu
Siqokelela iiNkcukacha zobuqu kunye nolwazi olungelolwakho lomntu osinika lona ukuba sithenge, sicele ulwazi okanye uhlaziyo kwiimveliso zethu okanye iinkonzo, okanye kungenjalo sisebenzise iiNkonzo. Siqokelela ngokuzenzekelayo iiNkcukacha zaBantu kunye neenkcukacha ezingezizo ezakho malunga nendlela ozisebenzisa ngayo iiNkonzo kunye nezinto ozikhethayo.
Sizisebenzisa njani iinkcukacha zakho
Sisebenzisa ulwazi lwakho, kubandakanya neDatha yobuNtu kwezi njongo zilandelayo: Ukubonelela ngeeNkonzo ozifunileyo, ukuphucula iinkonzo zethu, ukuthengisa iimveliso zethu, kunye nokubhala izinto ozithandayo ukuze unikezele olona luvo lusemgangathweni lwabasebenzisi.
Iziseko zomthetho zokuPhathwa kunye neZiphumo
Sithembele kwizizathu ezithile zomthetho zokuqokelela, ukuqhubekeka, kunye nokusetyenziswa kweNkcukacha zakho, ezinje ngokuqhubekeka okuyimfuneko ukukunika iimveliso okanye iinkonzo.
Ngokubanzi, ukubonelelwa ngeDatha yakho yobuNtu kungokuzithandela, kodwa kwezinye iimeko kunyanzelekile. Ukunganikezeli ngeDatha yakho yobuqu kunokukhokelela kububi kuwe.
Idatha yobuqu ekwabelwana ngayo namaQela esiThathu
Singabelana ngeeNkcukacha zakho kunye neenkampani zethu, abaxhasi kunye nabanye abantu besithathu emhlabeni jikelele ukukwazisa malunga neemveliso kunye nezibonelelo ezinokubangela umdla kuwe, njengoko kuvunyelwe ngumthetho osebenzayo.
Sisenokwabelana ngeeNkcukacha zakho kunye nababoneleli ngeenkonzo zethu kwihlabathi liphela, ekufuneka baphathe iiNkcukacha zaKho ngokungqinelana nesi Saziso saBucala, njengoko kufunwa ngumthetho nakwezinye iimeko xa usebenzisa ababoneleli beenkonzo ukubonelela ngeeNkcukacha zaBantu okanye iinkonzo kuwe. ngeeNkonzo zethu.
Ukuhamba kweDatha yaMazwe ngaMazwe
Amanye amazwe okanye ulawulo alunakho ukubonelela ngenqanaba elifanayo lokukhuselwa kwedatha njengelizwe apho iiNkcukacha zakho zaQokelelwa khona kuqala, nangona kunjalo siza kuthatha amanyathelo okuqhubeka nokukhusela ngokufanelekileyo iiNkcukacha zaKho.
Ukhetho lwakho kunye namalungelo
Ukuba ubekwe, okanye abahlali beendawo ezithile, unokuba nenani lamalungelo ngokunxulumene neDatha yakho yobuqu.
Kude kube nini sigcina idatha yakho
Asizigcini iiNkcukacha zakho zobuqu ixesha elide kunokuba sifuna njalo ..
Sinokuqokelela idatha yobuqu kuwe ngokusebenzisa kwakho iiNkonzo (ngakumbi, ukuba ukhetha ukubonelela), kubandakanya ngaphandle komda:
· Igama lakho, i-imeyile, igama lomsebenzisi, inombolo yefowuni, inkampani kunye nedilesi, ("Iinkcukacha zoqhakamshelwano");
· Isini sakho, ubudala, ubumi, imfundo, ubungcali, umsebenzi, kunye nenqanaba lomvuzo ("Ulwazi ngeDemographic");
· Inombolo yekhadi lakho lokuthenga ngetyala, idilesi yamatyala, idilesi yokuthumela, ikhowudi yokhuseleko kunye nezinye iintengiselwano zentlawulo kunye neenkcukacha zokuqinisekisa ("Iinkcukacha zeNtlawulo");
· Amaphepha kunye neemveliso ezijongiweyo, izinto ezongezwe kwinqwelo yakho yokuthenga, iintengiso ozicofileyo, ii-imeyile ezivela kuthi ozivulileyo, uhlobo lwesikhangeli, inkqubo yokusebenza ("OS"), iProtokholi ye-Intanethi ("IP") nedilesi kunye nolwazi lwendawo ( ngokudibeneyo, "Ulwazi loHlolo");
· Ulwazi olufumaneka esidlangalaleni malunga nawe kwimithombo yomntu wesithathu, njengenkonzo yeposi yokuqinisekisa idilesi yokuthumela;
· I-OS yakho yeselfowuni, isixhobo sokuchonga isixhobo esiphathwayo esifakelwe kuthi, okanye ezinye izixhobo zokuchonga izixhobo ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo.
Singaqokelela iiNkcukacha zaBantu kuwe malunga nomntu wesithathu. Umzekelo, njengenxalenye yenkqubo yobhaliso lweakhawunti yomhambisi, unokubonelela ngegama, inombolo yefowuni, kunye ne-imeyile yezonxibelelwano nezolawulo. Ukuba ufaka nayiphi na idatha yobuqu malunga nomnye umntu kuthi, unoxanduva lokuqinisekisa ukuba unegunya lokwenza njalo kwaye usivumele ukuba sisebenzise iiDatha zabo zobuqu ngokungqinelana nesi Saziso Sobumfihlo.
Sinokuqokelela iiNkcukacha zaKho okanye idatha yokusebenzisa kubantu besithathu, kubandakanya ngaphandle komda:
· Idilesi yakho ye-imeyile kunye nolunye ulwazi oluQokelelweyo malunga nawe unokugqithiselwa Sinocare yiwebhusayithi yomntu wesithathu xa usenza isicelo Sinocare ukunxibelelana nawe ngewebhusayithi yomntu wesithathu;
· Iinkcukacha zakho zinokugqithiselwa Sinocare xa ukhetha ukuthatha inxaxheba kwisicelo somntu wesithathu okanye into efana nengxoxo ephilayo, elinye lamaphepha eendaba ezentlalo okanye usetyenziso olufanayo okanye into kwiwebhusayithi yomntu wesithathu;
· IiNkcukacha zaBucala ezongezelelweyo zinokudluliselwa kwi- Sinocare kubantu besithathu ukudibanisa neDatha yobuqu esiyiqokelelayo ekusebenziseni kwakho iiNkonzo ukomeleza amandla ethu okukusebenzela, ukugxila kumxholo esikunika wona kunye nokubonelela ngamathuba okuthenga iimveliso okanye iinkonzo esikholelwa ukuba umdla kuwe ngokusekwe kulwazi esiluqokelele.
Siza kuyisebenzisa imiqathango yeSaziso sabucala kuyo nayiphi na idatha yobuqu efunyenwe kwiqela lesithathu, ngaphandle kokuba sikuxelele ngenye indlela. Sinocare ayiloxanduva lokusasaza aba bantu bakho besithathu.
Singazisebenzisa iiNkcukacha zaKho ngezi zinto zilandelayo, njengoko kuvunyelwe ngumthetho osebenzayo:
· Ukuthenga: Sinokusebenzisa iiNkcukacha zakho zoQhakamshelwano kunye neNkcukacha zeNtlawulo ukusivumela ukuba siqhubekeke kwaye sizalisekise izinto ozithengileyo kwiiNkonzo.
· Inkonzo eyenzelwe: Sinokusebenzisa iiNkcukacha zakho zoQhakamshelwano ukufumana nokuphendula imibuzo yakho malunga neemveliso, iinkonzo okanye iiwaranti kunye nokunxibelelana nawe malunga nokhuphiswano, uphando okanye i-sweepstakes. Ukuphendula imibuzo yakho, sinokucela kwakhona umzi mveliso wakho kunye / okanye igama kunye nedilesi yomthengisi okuthengisele imveliso yethu.
· impendulo: Sinokusebenzisa igama lakho lomsebenzisi, idilesi ye-imeyile, iimveliso ezithengiweyo, kunye nomnye umxholo owenziwe ngumsebenzisi onokuthi ubonelele ngawo xa ukala kwaye uphonononga iimveliso zethu.
· Ubhaliso lweWebhusayithi: Sinokusebenzisa iiNkcukacha zakho zoQhakamshelwano kunye neNkcukacha ngeDemografi xa usenza iakhawunti ngayo nayiphi na inkonzo yethu ukuze sikunike amava owasebenzisayo.
· Uhlalutyo: Xa usebenzisa iiNkonzo, siqokelela ngokuzenzekelayo kwaye sisebenzise ulwazi loHlahlelo ukuze siqhubeke siphucula amava akho neeNkonzo zethu kwaye sijolise kwintengiso kunye nentengiso yeeMveliso zethu kuwe.
· Ukuthengisa: Sinokusebenzisa iiNkcukacha zaKho ukufumanisa ukuba zeziphi iimveliso ezinokubangela umdla kuwe, sikunike unxibelelwano lokuthengisa (ngaphandle kokuba ukhethe ukuphuma kunxibelelwano olunjalo) kunye nokwenza uphando kwimakethi. Sinokusebenzisa ulwazi osinike lona, ​​kubandakanya nomzi mveliso wakho, nokuba ungumnikazi wemveliso yethu, amava kunye neemveliso zethu, kunye nomxholo owenziwe ngumsebenzisi kwezi njongo zokuthengisa.
· Iinkonzo ezisekwe kwindawo: Sinokusebenzisa indawo okuyo ngoku, idilesi ebonelelweyo kunye / okanye ikhowudi ye-zip ukukunika indawo okuyo umthengisi weemveliso zethu okanye olunye ulwazi olufanelekileyo.
Sinokusebenzisa iiNkcukacha zaKho ngezinye iindlela ezingqinelana neenjongo ezichazwe apha ngasentla kunye nokulawula iiwebhusayithi zethu kwaye sikunike neeNkonzo zethu.
Isiseko soMthetho sokuSebenza kunye neziphumo
Sithembele kwezi zizathu zomthetho zilandelayo zokuqokelela, ukuqhubekeka, kunye nokusetyenziswa kweenkcukacha zakho.
· ukuqhubekeka kuyimfuneko ukubonelela ngeenkonzo njengoko kuceliwe kuwe;
· imvume yakho;
· ukuqhubekeka kuyimfuneko ekusebenzeni kwekhontrakthi oba nenxaxheba kuyo okanye ukuthatha amanyathelo ngokwesicelo sakho ngaphambi kokungena kwisivumelwano;
· ukuqhubekeka kuyimfuneko ekuthobeleni uxanduva olusemthethweni esixhomekeke kulo;
· ukuqhubekeka kuyimfuneko ngeenjongo zomdla osemthethweni olandelwa sithi okanye ngumntu wesithathu, ngaphandle (kubahlali beNdawo yezoQoqosho yaseYurophu ("EEA")) apho ezo zinto zigqithiswe yiminqweno okanye amalungelo asisiseko kunye nenkululeko yenu ezifuna ukukhuselwa kwedatha yobuqu; umdla onjalo osemthethweni kukuzalisekiswa kweenjongo zokulungisa ezichazwe apha ngasentla.
Ngokubanzi, ukubonelelwa ngeDatha yakho yobuNtu kungokuzithandela, kodwa kwezinye iimeko kuye kufuneke ukuba ungene kwisivumelwano nathi okanye ufumane iimveliso okanye iinkonzo zethu njengoko kuceliwe kuwe.
Ukunganikezeli ngeNkcukacha zakho zoBuntu kunokubangela izinto ezingalunganga-umzekelo, usenokungakwazi ukufumana iimveliso kunye neenkonzo ezithile. Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, ukunganikezeli ngeenkcukacha zakho akuyi kubangela ziphumo zomthetho kuwe.
Isaziso ku Sinocare zimali
Amanye amaphepha eewebhusayithi zethu avumela abatyali mali ukuba bangene Sinocare ukufumana ulwazi olufumaneka esidlangalaleni olunxulumene nokusebenza kwenkampani. Abatyalomali banokujonga kunye / okanye bacele ulwazi oluthile kwiwebhusayithi yethu Apha. Kuxhomekeka ekubeni loluphi ulwazi oluceliweyo ngumtyali mali, inqaku lewebhusayithi yethu linokufuna, kwaye umtyali-mali angakhetha ukunika igama lomtyali mali, isihloko, umbutho, indawo yokuhlala, idilesi, inombolo yomnxeba kunye nedilesi ye-imeyile ("Ingcaciso yabatyali" ). Sinocare liza kusebenzisa ulwazi loTyalomali ukuqinisekisa ubungqina bokuba umtyali-mali kwaye luzalisekise naziphi na izicelo zolwazi.
Isaziso kubafaki zicelo
Amanye amaphepha eewebhusayithi zethu abandakanya ukukwazi kwabantu abanomdla wokusebenzela Sinocare okanye enye yenkxaso-mali okanye iinkampani ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga namathuba engqesho e Sinocare, abaxhasi bayo kunye / okanye iinkxaso-mali. Ukufaka isicelo kwizikhundla ezivulekileyo usebenzisa iwebhusayithi yethu, kuya kufuneka wenze iprofayile yengqesho kwiwebhusayithi yethu Apha, kubandakanya ulwazi oluthi Sinocare ikucela ukuba ubonelele, kwaye unokukhetha ukunikezela, ukuze uqwalaselwe ngengqesho ("Ulwazi loMceli weNgqesho").
Ngaphambi kokwenza iprofayili yengqesho, kuya kufuneka uvume ngokuqinisekileyo kwimigaqo yabucala elawula ukungeniswa kolwazi lwakho Sinocare ukulungiselela iinjongo zengqesho Apha. Imigaqo ovuma kuyo ukuze wenze iprofayili yengqesho iya kulawula SinocareUlwazi olusebenzisayo lokufaka isicelo sengqesho. Sinocare Uya kusebenzisa uLwazi loMfaki-sicelo weNgqesho ukulungiselela uvavanyo kunye neenjongo zokuqesha, nonxibelelwano ukuqhubela phambili uvavanyo kunye neenjongo zokuqesha.
Sigcina amanyathelo afanelekileyo obuchwephesha kunye nemibutho ukukhusela iiNkcukacha zaKho, kubandakanya nokuqinisekisa ukuba ababoneleli beenkonzo zomntu wesithathu abafikelela okanye abaphatha iiNkcukacha zaBantu egameni lethu kunye nabo babambiseneyo bagcina ezo zikhuselo. Sifuna ukubethela iinombolo zamakhadi etyala kwintengiselwano ye-e-commerce eqhutywa kwiiwebhusayithi zethu sisebenzisa ubuchwephesha besokethi ekhuselekileyo ("SSL").
Nangona kunjalo, akukho ndlela yokuhambisa i-Intanethi okanye ukugcinwa kwe-elektroniki ikhuselekile nge-100% okanye ngaphandle kwempazamo, ngenxa yoko akunakwenzeka ukuba kuqinisekiswe ukhuseleko olupheleleyo. Kuya kufuneka ukhusele kufikelelo olungagunyaziswanga kwi-password yakho nakwikhompyuter yakho, kwaye uqiniseke ukuba uyasayina xa ugqibile ukusebenzisa ikhompyuter eyabelwanayo. Ukuba unesizathu sokukholelwa ukuba unxibelelwano lwakho nathi alusakhuselekanga (umzekelo, ukuba uziva ukuba ukhuseleko lwayo nayiphi na iakhawunti onokuthi unalo lube semngciphekweni), nceda usazise kwangoko nge-imeyile [imeyile ikhuselwe] okanye ngokusitsalela umnxeba kwa + 86 175 0843 8176
Apho sikunike khona okanye ukhethe igama eligqithisiweyo elikunceda ukuba ufikelele kwiinxalenye ezithile zewebhusayithi yethu, unoxanduva lokugcina le mfihlo iyimfihlo. Akufanele wabelane ngephasiwedi yakho kunye nabani na.
Iinkcukacha zobuqu esiziqokelelayo okanye esizifumanayo ngawe zingadluliselwa kunye / okanye zilungiswe ngamalungu akhiwe ngaphakathi okanye ngaphandle kwe-EEA.
Abanye babamkeli beeNkcukacha zaBantu (jonga apha ngezantsi) bakumazwe anezigqibo ezaneleyo (ngakumbi iCanada (kwimibutho engekho phantsi kukarhulumente ngokuxhomekeke kuMthetho woKhuseleko lwaBantu baseCanada noMthetho wamaXwebhu e-elektroniki) naseArgentina), kwaye Ityala ngalinye, ugqithiselo ngokwenjenje luthathwa njengokunika inqanaba eloneleyo lokhuseleko lwedatha kwimbono yomthetho wokhuselo lwedatha yaseYurophu (jonga kubugcisa. 45 Ummiselo woKhuseleko lweDatha Jikelele- "GDPR").
Abanye abafumanayo banokubakho kumazwe angenzeli inqanaba elaneleyo lokhuseleko kumbono womthetho wokukhusela idatha waseYurophu (ngakumbi i-USA). Siza kuthatha onke amanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukuba ukukhutshwa kwi-EEA kukhuselwe ngokwaneleyo njengoko kufunwa ngumthetho wokukhuselwa kwedatha. Ngokubhekisele kugqithiselo kumazwe angaboneleli ngenqanaba elaneleyo lokhuseleko lwedatha, siza kulusebenzisa ugcino kwizikhuselo ezifanelekileyo, ezinje ngemigangatho yokhuseleko lwedatha esemthethweni eyamkelwe yiKhomishini yaseYurophu okanye ligunya lolawulo (Art. 46 (2) (c) okanye (d) GDPR), iikhowudi zokuziphatha ezivunyiweyo kunye nezibophelelo nezibophelelayo zomamkeli (Art. 46 (2) (e) GDPR), okanye iindlela ezivunyiweyo zokuqinisekisa kunye nokuzibophelela nokunyanzelisa komamkeli (Art. 46 (2) (f) GDPR). Unokucela ikopi yezi zikhuselo zifanelekileyo ngokunxibelelana nathi njengoko kuchaziwe apha ngasentla phantsi kwecandelo lokuNxibelelana nathi.
Sisebenzisa "iicookies", ifayile encinci yokubhaliweyo edluliselwe kwisixhobo sakho, kunye nobuchwephesha obufanayo (umzekelo, ubuchwepheshe bethegi ye-intanethi, iibhikhoni zewebhu kunye nezikripthi ezifakelweyo) ukukunceda ukuba ube nakho okungcono, okunamava omsebenzisi. Ukuze ufunde okungakumbi malunga nendlela esizisebenzisa ngayo iikuki kunye nokutshintsha iiseto zecookie, nceda Cofa apha.
Iimpawu ze "Musa ukulandela"
Ezinye iibrawuza ze-intanethi zibandakanya into ethi "Musa ukuKhangela" ebonisa imiqondiso kwiiwebhusayithi ozindwendwelayo ongafuni ukuba zilandelwe izinto ezenziwa kwi-Intanethi. Ngenxa yokuba ayikho indlela efanayo yokuba iibrawuza zinxibelelana nomqondiso "Musa ukuKhangela", iiwebhusayithi zethu azitolikisi, aziphenduli okanye ziguqule izenzo zazo xa zifumana imiqondiso ethi "Musa ukuKhangela".
Sisebenzisa i-Google reCAPTCHA, eyinkonzo yasimahla ekhusela iwebhusayithi kwi-spam kunye nokusetyenziswa gwenxa kusetyenziswa ubuchwephesha bokuphononongwa komngcipheko ukuxelela abantu kunye ne-bots ngokwahlukeneyo. I-Google reCAPTCHA isebenza ngokwahlukileyo ngokuxhomekeke kuhlobo olusebenzayo. Umzekelo, unokucelwa ukuba ujonge ibhokisi ebonisa ukuba awuyirobhothi okanye iGoogle reCAPTCHA inokufumana ukugcwala kwabantu ngaphandle kokunxibelelana nomsebenzisi. I-Google reCAPTCHA isebenza ngokudlulisa iintlobo ezithile zolwazi kuGoogle, ezinje ngereferensi ye-URL, idilesi ye-IP, indlela yokuziphatha kwabatyeleli, ulwazi lwenkqubo yokusebenza, isikhangeli kunye nobude botyelelo, ii-cookies kunye nokuhamba kweempuku. Ukusetyenziswa kwakho kweGoogle reCAPTCHA kuxhomekeke kuGoogle umthetho wabucala kwaye Imigaqo yokuSebenzisa. Ulwazi oluthe kratya malunga neGoogle reCAPTCHA kunye nendlela esebenza ngayo iyafumaneka Apha.
Sabelana ngeNkcukacha zakho kunye neenkampani, imibutho kunye nabantu abangaphandle Sinocare njengoko kuchaziwe ngezantsi.
· Abamkeli ngaphakathi Sinocare namaQela esiThathu. Singabelana ngeenkcukacha zakho kunye SinocareAbarhwebi kunye nezinye iinkampani kwihlabathi liphela, kubandakanya abathengisi bethu abangabandakanyekanga, abavelisi, kunye nababoneleli ukuze ezi nkampani zinxibelelane nawe malunga neemveliso zazo, iinkonzo okanye ezinye izinto ezinokubangela umdla kuwe. Sisenokwabelana ngeeNkcukacha zakho kunye namaqabane athile eshishini. Kuxhomekeke kudidi lweDatha yobuNtu kunye neenjongo zokuqokelelwa kweDatha yobuqu, amaziko ohlukeneyo kunye namasebe angaphakathi kula maziko angayifumana idatha yakho yobuqu. Umzekelo, isebe lethu le-IT linokufikelela kwidatha yeakhawunti yakho, kwaye amasebe ethu okuthengisa kunye nentengiso anokufikelela kwidatha yeakhawunti yakho okanye idatha enxulumene neeodolo zemveliso. Ngapha koko, amanye amasebe ngaphakathi Sinocare unokufikelela kuLwazi oluBodwa malunga nawe kwimfuno yokwazi isiseko, esifana nesebe lezomthetho kunye nokuthobela, isebe lezemali okanye uphicotho lwangaphakathi. Esi Saziso Sobucala asilawuli iiwebhusayithi zomntu wesithathu ezingahambelaniyo okanye nayiphi na iwebhusayithi engahambelani nesi Saziso Sobumfihlo.
· Ababoneleli ngeNkonzo. Singabelana ngeenkcukacha zakho kunye neenkampani ezihlangeneyo nezingadibaniyo ezenza imisebenzi egameni lethu ezinxulumene neshishini lethu. Le misebenzi ibandakanya ukuhlawulwa kweentlawulo, ukufezekisa iiodolo, ukuhambisa iiphakeji, iinkonzo zalapha ekhaya, ukuhlalutya iwebhusayithi okanye idatha yokusetyenziswa kweselfowuni, inkonzo yabathengi, inkonzo ye-imeyile kunye neposi, ukhuphiswano / uphando / ulawulo lwe-sweepstakes, iinkonzo zentengiso, ezorhwebo kunye neenkonzo zosasazo (umz. ukulinganisa, ukuphononongwa, iiforamu), kunye nokubala, ukulawula nokunika ingxelo ngerhafu yokuthengisa. Ababoneleli beenkonzo zomntu wesithathu bafumana iiNkcukacha zaKho njengoko kufanelekile ukuze badlale indima yabo, kwaye siyabayalela ukuba bangazisebenzisi iiNkcukacha zakho zobuqu nakwezinye iinjongo.
· Njengoko kufuneka njalo okanye kufanelekile ngokomthetho. Siza kusebenzisa kwaye sichaze iiNkcukacha zaKho njengoko kuvunyelwe ngumthetho ofanelekileyo, kubandakanya ngaphandle komda:
o Phantsi komthetho osebenzayo, kubandakanya nemithetho engaphandle kwelizwe lakho lokuhlala, ukuthobela iinkqubo zomthetho nokuphendula kwizicelo ezivela kurhulumente nakurhulumente, kubandakanywa nabasemagunyeni bakarhulumente nabangaphandle kwelizwe lakho.
o Ukunyanzelisa imigaqo kunye neemeko zethu, kubandakanya nophando lokophula okunokubakho;
o Ukufumanisa, ukuthintela okanye ukujongana nobuqhetseba, imiba yezokhuseleko okanye yezobugcisa; kwaye
o Ukukhusela imisebenzi yethu okanye nayiphi na inye yamashishini; ukukhusela amalungelo ethu, imfihlo, ukhuseleko okanye ipropathi, kunye / okanye abo sidibana nabo, wena okanye abanye; nokusivumela silandele amayeza afumanekayo okanye ukunciphisa umda kumonakalo esinokuthi siqhubeke nawo.
· UkuTshintshiselwa kweShishini. Njengoko siqhubeka nokukhulisa ishishini lethu, sinokuthengisa okanye sithenge iimveliso, iivenkile, iinkxaso-mali okanye iiyunithi zeshishini. Singabelana kunye / okanye sitshintshele iiNkcukacha zakho zobuqu kunye nomntu wesithathu kwintengiselwano enjalo (kubandakanya ngaphandle komda, nakuphi na ukulungelelaniswa, ukudityaniswa, ukuthengiswa, ukudityaniswa, ukwabiwa, ukuhanjiswa okanye okunye ukubekwa kwayo yonke into , iinkxaso-mali okanye ezinye iiasethi). Ulwazi loMthengi ngokubanzi yenye yeeasethi zeshishini ezihanjisiweyo, kodwa luhlala luxhomekeke kuso nasiphi na iSaziso semfihlo esisebenzayo.
Singabelana ngedatha edityanisiweyo engachazwanga (ukuze ungachongwa) nabantu besithathu- njengabapapashi, abathengisi okanye iiwebhusayithi eziqhagamshelekileyo- kwaye sinokwenza ukuba le datha ifumaneke esidlangalaleni. Umzekelo, sinokwabelana esidlangalaleni ngolwazi ukubonisa iintsingiselo malunga nokusetyenziswa ngokubanzi kweenkonzo zethu okanye iimveliso.
Iiwebhusayithi zethu zinokunikela ngeeblogi ezifikeleleka esidlangalaleni, iibhodi zemiyalezo, okanye iiforamu zoluntu. Kuya kufuneka uyazi ukuba nayiphi na ingcaciso oyinikezelayo kwezi ndawo inokufundwa, iqokelelwe, kwaye isetyenziswe ngabanye abayifumanayo.
Qhagamshela kwiNethiwekhi yokuNxibelelana kunye nezinye iiWebhusayithi zaBanye abantu
Iinkonzo zethu zinokuqulatha amakhonkco onxibelelwano lwasentlalweni kunye nezinye iiwebhusayithi kunye nokusetyenziswa kweselfowuni okuqhutywa nokulawulwa ngabantu besithathu. Ngelixa sizama ukunxibelelana kuphela neewebhusayithi ezabelana ngemigangatho yethu ephezulu kunye nentlonipho yobumfihlo, asithathi uxanduva lomxholo okanye iinkqubo zabucala eziqeshwe zezinye iiwebhusayithi. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, nayiphi na idatha yobuqu oyinikelayo nakweliphi na iqela lesithathu liya kuqokelelwa lelo qela hayi kuthi, kwaye iya kuba phantsi komgaqo-nkqubo wabucala welo qela (ukuba ukhona), endaweni yesi Saziso Sobumfihlo. Kwimeko enjalo, asiyi kuba nolawulo, kwaye asiyi kuba noxanduva lokusebenzisa iqela elo kwiNkcukacha zoBuntu ozinike zona.
Ngokuhambelana noMthetho woKhuseleko lwaBucala lwaBantwana kwi-Intanethi, i-15 USC, §§ 6501-06 kunye ne-16 CFR, §§ 312.1-312.12, iwebhusayithi yethu ayivumeli abantwana abangaphantsi kweminyaka eli-13 ubudala ukuba babe ngabasebenzisi, kwaye asiqokeleli ulwazi ngabom kubantwana. Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, umele ukuba uneminyaka eli-13 ubudala okanye ngaphezulu.
Ukuba ubekwe, okanye abahlali beendawo ezithile, unokuba nenani lamalungelo ngokunxulumene neeNkcukacha zakho, njengoko kuchaziwe ngezantsi.
Abemi boMzantsi Afrika
Nceda ujonge apha ingxelo yabucala yangaphandle kwaye ukufikelela kwincwadana yolwazi esebenzayo eMzantsi Afrika.
Kwimeko apho ubekwe kwi-EEA xa ungena kwiiNkonzo, okanye kwisilawuli sedatha njengoko kuchaziwe apha ngasentla kwicandelo Uqwalaselo luse-EEA, oku kulandelayo kuyasebenza:
Ukuba ubhengeze imvume yakho ngokubhekisele ekuqokeleleni, ekusebenziseni nasekusebenziseni iiNkcukacha zakho (ngakumbi malunga nokufumana unxibelelwano lokuthengisa ngokuthe ngqo nge-imeyile, iSMS / iMMS, ifeksi, kunye nomnxeba- apho kufanelekileyo), ungayirhoxisa le mvume nangayiphi na ixesha kunye nefuthe elizayo. Ngaphaya koko, unokukuchasa ukusetyenziswa kweNkcukacha zaKho ngeenjongo zokuthengisa.
Nceda uqaphele ukuba amalungelo akhankanywe apha ngasentla anokuhlengahlengiswa phantsi komthetho osebenzayo wokukhusela idatha. Apha ngezantsi nceda ufumane ulwazi oluthe kratya malunga namalungelo akho ukuya kuthi ga apho i-GDPR isebenza khona (ukuthintela ukuthandabuza oku kulandelayo kusebenza kuphela kwimeko apho ubekwe kwi-EEA xa ungena kwiiNkonzo okanye kumlawuli wedatha njengoko kuchaziwe apha ngasentla kwicandelo Uqwalaselo lukhona kwi-EEA):
(i) Ilungelo lokucela ukufikelela kwiNkcukacha zakho
Unokuba nelungelo lokufumana kuthi isiqinisekiso sokuba ingaba iiNkcukacha zobuqu ezimalunga nawe ziyasetyenzwa na, kwaye, ukuba kunjalo, ukucela ukufikelela kwiDatha yobuqu. Olu lwazi lokufikelela lubandakanya iinjongo zokuqhubekeka, iindidi zeDatha yobuNtu echaphazelekayo, kunye nabamkeli okanye iindidi zabamkeli abo iiDatha zoBuntu ziye zaza kuchazwa.
Unokuba nelungelo lokufumana ikopi yeNkcukacha zaBantu eziqhubekekayo. Ukufumana ezinye iikopi eziceliwe nguwe, sinokubiza imali efanelekileyo ngokusekelwe kwiindleko zolawulo.
(ii) Ilungelo lokucela ukulungiswa
Unokuba nelungelo lokufumana kuthi ulungiso lweeNkcukacha zakho ezingachanekanga malunga nawe. Kuxhomekeke kwiinjongo zenkqubo, unokuba nelungelo lokuba iNkcukacha zaBantu ezingazaliswanga zigqitywe, kubandakanya nokunikezela ngengxelo eyongezelelweyo.
(iii) Ilungelo lokucela ukucinywa (ilungelo lokulibala)
Ngaphantsi kweemeko ezithile, unokuba nelungelo lokufumana kuthi ukususwa kweDatha yobuqu malunga nawe kwaye sinokunyanzeleka ukuba siyicime loo Datha yobuqu.
(iv) Ilungelo lokucela isithintelo ekusebenzeni
Ngaphantsi kweemeko ezithile, unokuba nelungelo lokufumana kuthi isithintelo sokuqhubekeka kweenkcukacha zakho. Kwimeko enjalo, idatha efanelekileyo iya kuphawulwa kwaye inokuqwalaselwa kuphela kuthi ngeenjongo ezithile.
(v) Ilungelo lokucela ukuphatheka kwedatha
Ngaphantsi kweemeko ezithile, unokuba nelungelo lokufumana iiDatha zoBuntu malunga nawe, osinike zona, ngendlela ehleliweyo, esetyenziswa ngokuxhaphakileyo kunye nefomathi efundeka ngomatshini kwaye unokuba nelungelo lokuhambisa ezo datha kwelinye iziko ngaphandle kwesithintelo. kuthi.
(vi) Ilungelo lokuchasa
Ngaphantsi kweemeko ezithile, unokuba nelungelo lokuphikisa, ngenxa yezizathu ezinxulumene nemeko ethile, nangaliphi na ixesha ekuqhubekekeni kweDatha yakho yobuNtu kuthi kwaye sinokucelwa ukuba singaphindi siqhubekeke. Ilungelo elinjalo lokuchasa linokusebenza ngakumbi ukuba Sinocare iqokelela kwaye isebenzise iiNkcukacha zakho zoBuntu ngenjongo yokufumana ulwazi ukuze uqonde ngcono umdla wakho kwishishini SinocareIimveliso kunye neenkonzo. Ukongeza apho unokuchasa ukusetyenziswa kwedatha yakho ngeenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo. Ukuba unelungelo lokuchasa kwaye usebenzisa eli lungelo, idatha yakho yobuqu ayisayi kuphinda iqhutyelwe ezo njongo sithi. Ukuze usebenzise eli lungelo nceda unxibelelane nathi njengoko kuchaziwe apha ngasentla phantsi kwecandelo lokuNxibelelana Nathi, phantsi kweemeko ezithile, unokuba nelungelo lokuphikisa, ngezizathu ezinxulumene nemeko ethile, nangaliphi na ixesha ekuqhubekeni kweDatha yakho yobuqu kuthi kwaye unokucelwa ukuba ungaphindi ucubungule iiNkcukacha zakho. Ilungelo elinjalo lokuchasa linokusebenza ngakumbi ukuba Sinocare iqokelela kwaye isebenzise iiNkcukacha zakho zoBuntu ngenjongo yokufumana ulwazi ukuze uqonde ngcono umdla wakho kwishishini SinocareIimveliso kunye neenkonzo. Ukongeza apho unokuchasa ukusetyenziswa kwedatha yakho ngeenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo. Ukuba unelungelo lokuchasa kwaye usebenzisa eli lungelo, idatha yakho yobuqu ayisayi kuphinda iqhutyelwe ezo njongo sithi. Ukuze usebenzise eli lungelo nceda unxibelelane nathi njengoko kuchaziwe apha ngasentla phantsi kwecandelo lokuNxibelelana nathi.
Nangona kunjalo, ilungelo elinjalo lokuchasa linokubakho ngokukodwa ukuba ukuqhubekeka kweDatha yakho yoBuntu kuyafuneka ukuthatha amanyathelo ngaphambi kokungena kwisivumelwano okanye ukwenza isivumelwano esele sigqityiwe.
Kwimeko apho usinike imvume yakho ngeenjongo zokuthengisa ngokuthe ngqo (umzekelo, ubhalisile kwiincwadana zethu) ungayirhoxisa imvume yakho njengoko kuchaziwe ngasentla kweli candelo.
(vii) Amanye amalungelo ngokunxulumene nokwenza izigqibo ngokuzenzekelayo
Ngaphaya koko, phantsi kweemeko ezithile ngokubhekisele ekuthatheni izigqibo ezizenzekelayo, unelungelo lokufumana ungenelelo lomntu, uchaze umbono wakho, kwaye usiphikise isigqibo.
Unokuba nelungelo lokufaka isikhalazo kwigunya elilawulayo lokukhusela idatha. Ungaliphumeza eli lungelo kwigunya lokulawula ngokukodwa kwiLungu leLungu le-EEA lendawo ohlala kuyo, kwindawo osebenza kuyo okanye kwindawo yolwaphulo-mthetho.
Idatha yakho yobuqu iya kugcinwa ixesha elide xa kufuneka unikezele ngeenkonzo kunye neemveliso eziceliweyo. Nje ukuba ubugqibe ubudlelwane bakho nathi, siyakucima iiNkcukacha zaKho okanye senze igama lakho lingaziwa, ngaphandle kokuba kusebenza iimfuno zomthetho (ezinje ngerhafu). Sinokugcina iinkcukacha zakho zonxibelelwano kunye nomdla kwiimveliso zethu okanye kwiinkonzo ixesha elide ukuba usivumele ukuba sikuthumele izinto zokuthengisa. Sinokugcina iiNkcukacha zaKho zobuqu emva kokupheliswa kobudlelwane bekhontrakthi ukuba iiNkcukacha zaKho ziyafuneka ukuthobela eminye imithetho esebenzayo okanye ukuba sifuna idatha yakho yobuqu ukumisela, ukusebenzisa okanye ukukhusela ibango elisemthethweni, ngesidingo sokwazi kuphela . Kangangoko kunokwenzeka, siya kuthintela ukuqhubekeka kweDatha yobuqu yezo njongo zilinganiselweyo emva kokupheliswa kobudlelwane besivumelwano.
Umthetho weNevada uvumela abahlali baseNevada ukuba baphume kwintengiso yeentlobo ezithile zolwazi lomntu siqu. Kuxhomekeke kwimida eyahlukeneyo, umthetho weNevada uchaza "ukuthengisa" kuthetha ukutshintshiselana kweentlobo ezithile zolwazi lomntu buqu ukuze kuthathelwe ingqalelo imali yomntu ukuze umntu lowo abe nelayisensi okanye athengise olo lwazi kubantu abongezelelekileyo. Asizithengisi iinkcukacha zakho njengoko kuchaziwe kumthetho weNevada. Nangona kunjalo, ukuba ungumhlali waseNevada, usengasingenisa isicelo esiqinisekisiweyo sokukhetha ukuphuma kwintengiso kwaye siya kuyirekhoda imiyalelo yakho kwaye siyifake kwixesha elizayo ukuba umgaqo-nkqubo wethu uyatshintsha. Izicelo zokuphuma zinokuthunyelwa ku: [imeyile ikhuselwe].
Umthetho wabucala wabathengi waseCalifornia, uCal. Civ. Ikhowudi § 1798.100 et seq. ("CCPA"), ifuna ukuba sinikeze abahlali baseCarlifonia ngesaziso sangasese esiqulethe inkcazo ebanzi yeendlela zethu ezenziwa kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi malunga nokuqokelela, ukusetyenziswa, ukuveza, kunye nokuthengisa ulwazi lomntu kunye namalungelo abahlali baseCalifornia malunga nobuntu babo ulwazi. Eli candelo leSaziso sabucala lenzelwe kuphela, kwaye lisebenza kuphela kubahlali baseCalifornia. Ukuba awunguye umhlali waseCalifornia, oku akusebenzi kuwe kwaye akufuneki uxhomekeke kuyo.
I-CCPA ichaza "ulwazi lomntu" ukuba luthetha ulwazi oluchonga, olunxulumene, oluchazayo, olusebenzayo lunakho ukuba lunxulunyaniswe, okanye lunokudityaniswa ngokufanelekileyo, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, nomhlali othile waseCalifornia okanye indlu. Ulwazi lomntu alubandakanyi ukufumaneka esidlangalaleni, ulwazi olwenziweyo okanye ulwazi oluhlanganisiweyo. Ngeenjongo zeli candelo labahlali baseCalifornia, siya kubhekisa kolu lwazi njenge "Ulwazi lobuqu."
I-CCPA iqulethe okwahlukileyo okufanelekileyo kuthi. Amanye amalungelo e-CCPA abucala achazwe ngezantsi awasebenzi kwiiNkcukacha zaBantu eziqokelelwe kwimeko yeshishini ukuya kwishishini. Olu lwazi olubonisa unxibelelwano olubhaliweyo okanye oluthethwayo okanye intengiselwano phakathi kwethu nomthengi, apho umthengi esebenza njengomqeshwa, umnini, umlawuli, igosa, okanye ikhontrakthi yelinye iziko naxa unxibelelwano okanye intengiselwano isenzeka kuphela ngaphakathi komxholo siqhuba ngenyameko efanelekileyo ngokubhekisele, okanye ukubonelela okanye ukufumana imveliso okanye inkonzo kuye okanye evela, iziko elinjalo.
(i) Ilungelo lokwazi malunga neNkcukacha zoBuntu eziqokelelweyo, eziDiziweyo, okanye ezithengisiweyo
Ukuba ungumhlali waseCalifornia, unelungelo lokucela ukuba sichaze ukuba loluphi ulwazi oluqulethwe nguwe. Eli lungelo liquka ilungelo lokucela nayiphi na okanye zonke ezi zinto zilandelayo:
· Iziqwenga ezithile zoLwazi lobuqu esiziqokelele malunga nawe;
· Iindidi zoLwazi lobuqu esiziqokelele malunga nawe;
· Iindidi zemithombo yolwazi ekuqokelelwe kuyo iiNkcukacha zobuqu;
· Iindidi zeNkcukacha zobuqu esizithengisileyo (ukuba kufanelekile) okanye ezichazelwe iinjongo zeshishini malunga nawe;
· Iindidi zabantu besithathu abathe bathengiselwa iiNkcukacha zobuqu (ukuba zikhona) okanye zabhengezwa ngenjongo yeshishini; kwaye
· Ishishini okanye iinjongo zorhwebo zokuqokelela okanye, ukuba kufanelekile, ukuthengisa iiNkcukacha zaBantu.
Ukuqokelelwa kweeNkcukacha zaBantu
Okwangoku siqokelela kwaye, kwiinyanga ezili-12 phambi komhla "wokugqibela ohlaziyiweyo" weSaziso soBucala, siqokelele ezi ndidi zilandelayo zeNkcukacha zaBantu malunga nabahlali baseCalifornia ngokuthe ngqo kubo nakubathengisi beenkcukacha, amaziko karhulumente, amaqabane oshishino kunye namashishini amanyeneyo:
· Izazisi (igama, idilesi yeposi, idilesi ye-intanethi, idilesi ye-imeyile, igama leakhawunti)
· Izazisi ezizodwa (ii-cookies, iibhakoni, iithegi zepikseli, izikhombi zeentengiso eziphathwayo, okanye enye itekhnoloji efanayo; inombolo yomthengi, igama elikhethekileyo okanye igama lomsebenzisi; iinombolo zomnxeba, okanye ezinye iindlela zokuchonga eziqhubekayo okanye ezinokubakho ezinokusetyenziselwa ukuchonga umthengi othile okanye isixhobo)
· Inombolo yefowni
· Inombolo yekhadi letyala kunye nedebhithi
· Olunye ulwazi lwezemali (umzekelo, umvuzo wekhaya, inombolo yokuxolelwa kwirhafu)
· Naluphina ulwazi kwisicelo somthengi kunye nembali yamabango, kubandakanya neerekhodi zezibheno, ukuba ulwazi ludityanisiwe okanye lunxibelelene ngokufanelekileyo nomthengi okanye indlu, kubandakanya ngecebo, lishishini okanye ngumboneleli ngenkonzo.
· I-Intanethi okanye olunye ulwazi lomsebenzi wenethiwekhi (ukubrawuza imbali kunye nolwazi malunga nokunxibelelana kwabathengi newebhusayithi, usetyenziso okanye intengiso)
· Idatha ye-geolocation
· Ulwazi lwezorhwebo (iirekhodi zepropathi yobuqu, iimveliso okanye iinkonzo ezithengiweyo, ezifunyenweyo okanye eziqwalaselweyo; enye imbali yokuthenga okanye yokutya okanye yeendlela)
· Ulwazi lwemfundo
· Ulwazi olunobungcali okanye olunxulumene nengqesho
· Iimpawu zokuhlelwa okukhuselweyo phantsi kweCalifornia okanye umthetho womanyano (umzekelo, isini kunye nenqanaba lomtshato)
· Ukuchaphazeleka okutsalwe kulwazi olungasentla ukwenza iprofayili malunga nomboleki ebonisa ukuthanda komthengi, iimpawu, imeko yengqondo, iimeko ezithile, indlela yokuziphatha, izimo zengqondo, ubukrelekrele, amandla kunye nobuchule
Ukongeza kwezi njongo zichazwe apha ngasentla kwicandelo lokuba sizisebenzisa njani iinkcukacha zakho, siqokelela, kwaye siqokelele saza sathengisa, ezi ndidi zingasentla zeNkcukacha zobuqu kwezi njongo zilandelayo zeshishini okanye zorhwebo:
· Ukuphicothwa okunxulumene nokunxibelelana okwangoku nomthengi kunye nentengiselwano efanayo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ukubala ukubonakala kweentengiso kubakhenkethi ababodwa
· Ukuchonga izehlo zokhuseleko, ukukhusela ububi, ukukhohlisa, ubuqhetseba, okanye isenzo esingekho mthethweni, kunye nokutshutshisa abo banoxanduva lokwenza
· Ukulungisa iingxaki ekuchongeni nasekulungiseni iimpazamo ezonakalisa ukusebenza okucwangcisiweyo
· Ukwenza iinkonzo, kubandakanya ukugcina okanye ukuhambisa iiakhawunti, ukubonelela ngeenkonzo zabathengi, ukuqhuba okanye ukufezekisa iiodolo kunye nokuthengiselana, ukuqinisekisa ulwazi lwabathengi, ukuqhubekeka kweentlawulo, ukubonelela ngemali, ukubonelela ngentengiso okanye ngeenkonzo zentengiso, ukubonelela ngeenkonzo zohlalutyo, okanye ukubonelela ngeenkonzo ezifanayo
· Ukwenza uphando lwangaphakathi kuphuhliso lobuchwepheshe kunye nemiboniso
· Ukwenza imisebenzi yokuqinisekisa okanye ukugcina umgangatho okanye ukhuseleko lwenkonzo okanye isixhobo esisesakhe, esenzelwe, esenzelwe, okanye esilawulwa sithi, kunye nokuphucula, ukuphucula, okanye ukuphucula inkonzo okanye isixhobo
· Ukuqhubela phambili umdla kurhwebo okanye kuqoqosho lomntu, njengokunyanzela omnye umntu ukuba athenge, aqeshise, aqeshise, ajoyine, abhalise, anikezele, okanye atshintshe iimveliso, iimpahla, ipropathi, ulwazi, okanye iinkonzo, okanye ukwenza okanye ukwenza ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, intengiselwano yorhwebo
Ukubhengezwa okanye ukuThengiswa kweNkcukacha zaBantu
Le theyibhile ilandelayo ichonga iindidi zeNkcukacha zobuqu esithe sazichaza ngenjongo yeshishini kubanikezeli beenkonzo okanye esizithengisileyo kubantu besithathu kwiinyanga ezili-12 ezandulela umhla "wokugqibela ohlaziyiweyo" weSaziso soBucala kwaye, kudidi ngalunye, udidi lwabanikezeli beenkonzo okanye umntu wesithathu othe wathengiswa okanye waxelwa kuye ulwazi ngoBuntu:
Udidi lweenkcukacha zakho
Udidi lwaBanikezeli beenkonzo
Udidi lwamaQela esiThathu
· Amaqabane oshishino / iinkampani ezimanyeneyo
· Umboneleli wedatha yohlalutyo
· Intengiso yangaphandle
· I intanethi
· Iinethiwekhi zentengiso
· Ukunyanzeliswa komthetho / izicelo zomthetho
Ulwazi olunobungcali okanye olunxulumene nengqesho
Iirekhodi zemveliso okanye iinkonzo ezithengiweyo, ezifunyenweyo okanye eziqwalaselweyo
Iicookies, iibhikhoni, iiphikseli zeepikseli, izikhombi zentengiso eziphathwayo, okanye enye itekhnoloji efanayo
Ukwahlulelwa okukhuselweyo (umzekelo, isini kunye nenqanaba lomtshato)
· Iarhente yentengiso
Ukuchaphazeleka okutsalwe kulwazi olungasentla ukwenza iprofayili malunga nomthengi ebonisa ukhetho lomthengi, iimpawu, imeko yengqondo, iimeko ezithile, indlela yokuziphatha, izimo zengqondo, ubukrelekrele, amandla kunye nobuchule
Ukuthenga okanye ukuchitha iimbali okanye utyekelo
Asazi siqokelela okanye sithengise iiNkcukacha zaBantu abangaphantsi kweminyaka eli-16 ubudala.
(ii) Ilungelo lokucela ukususwa kweenkcukacha zakho
Ukuba ungumhlali waseCalifornia, unelungelo lokucela ukuba sicime iiNkcukacha zaBantu ngawe esiziqokeleleyo. Nangona kunjalo, ngokweCCPA, akukho mfuneko yokuba sithobele isicelo sokucima ukuba kunyanzelekile ukuba sigcine iiNkcukacha zaBantu ukuze, umzekelo, sigqibe ukuthengiselana, sibone izehlo zokhuseleko, sihambisane nesibophelelo esisemthethweni, okanye kungenjalo sebenzisa iiNkcukacha zobuqu, ngaphakathi, ngendlela esemthethweni ehambelana nomxholo apho ubonelele ngolwazi olo.
(iii) Ilungelo lokukhetha ukuThengisa iiNkcukacha zaBantu
Ukuba ungumhlali waseCalifornia, unelungelo lokusiyalela ukuba siyeke ukuthengisa iiNkcukacha zakho.
I-CCPA ichaza “ukuthengisa” kuthetha ukuthengisa, ukuqesha, ukukhulula, ukuveza, ukusasaza, ukwenza ukufumaneka, ukuhambisa, okanye ukunxibelelana ngomlomo, ngokubhaliweyo, okanye nge-elektroniki okanye ngenye indlela, Ulwazi lobuqu lwaseCalifornia kolunye ushishino okanye umntu wesithathu yemali okanye enye into enexabiso.
Ukuphuma ekusebenziseni iiKuki zentengiso zomntu wesithathu, nceda ubone icandelo Iicookies ezilapha ngasentla. Ungangenisa isicelo sokukhetha ukuphuma kwintengiso ngokunqakraza kule khonkco: “Musa ukuThengisa iiNkcukacha zam. ” Ungasingenisa isicelo ngokusitsalela umnxeba ku + 86 175 0843 8176.
Ukuba endaweni yoko ufuna ukurhoxa kunxibelelwano lwethu lokuthengisa, nceda ukhethe ikhonkco elingabhaliswanga kwi-footer ye-imeyile yethu yonxibelelwano okanye usithumelele i-imeyile
(iv) Ilungelo lokungacaluli ukuSebenzisa amaLungelo aBucala abahlali baseCalifornia
Asiyi kubacalula abahlali baseCalifornia ukuba basebenzise nawaphi na amalungelo anikezelwe kwiCCPA njengoko kuchaziwe kweli candelo labahlali baseCalifornia. Kananjalo, asizukukhanyela iimpahla okanye iinkonzo kulomhlali waseCalifornia; ukuhlawulisa amaxabiso awohlukeneyo okanye iirhafu zempahla okanye zeenkonzo, kubandakanya ngokusebenzisa izaphulelo okanye ezinye izibonelelo okanye ukumisela izohlwayo; ukubonelela ngenqanaba elahlukileyo okanye umgangatho wempahla okanye iinkonzo kumhlali waseCalifornia; okanye ucebise ukuba umhlali waseCalifornia azakufumana ixabiso elahlukileyo okanye umyinge wempahla okanye iinkonzo okanye inqanaba elahlukileyo okanye umgangatho wempahla okanye iinkonzo. Nangona kunjalo, sivunyelwe ukuhlawulisa umhlali waseCalifornia ngexabiso okanye ngexabiso elahlukileyo, okanye ukubonelela ngenqanaba elahlukileyo okanye umgangatho wempahla okanye iinkonzo, ukuba umahluko unxulumene ngokufanelekileyo nexabiso esinikezwe lona yidatha yomntu.
Ungenisa njani isicelo sokwazi okanye sokucima
Ungasingenisa isicelo sokwazi okanye sokucima ngokusitsalela umnxeba kule nombolo: +86 175 0843 8176.
Inkqubo yethu yokuNgqinisisa isicelo soKwazi okanye ukuCima
Ukuba sifumanisa ukuba isicelo sakho sixhomekeke kukhululo okanye ngaphandle, siya kukwazisa ngokuzimisela kwethu. Ukuba sifumanisa ukuba isicelo sakho asixhomekekanga ekuxolelweni okanye ngaphandle, siya kuthobela isicelo sakho ekuqinisekiseni isazisi sakho, kwaye, ukuya kuthi ga apho kufanelekileyo, isazisi somhlali waseCalifornia osenzela eso sicelo.
Siza kuqinisekisa ubuwena bakho "kwinqanaba elichanekileyo lokuqiniseka" okanye "ukuqiniseka okuphezulu" ngokuxhomekeke kubuntununtunu beNkcukacha zaBantu kunye nomngcipheko wokwenzakala kuwe ngokuchazwa okungagunyaziswanga okanye ngokususwa njengoko kufanelekile.
Kwizicelo zokufikelela kumacandelo eeNkcukacha zaBantu kunye nezicelo zokucima iiNkcukacha zaBantu ezingabuthathaka nezingabeki mngcipheko wenzakalo ngokususwa okungagunyaziswanga, siyakuqinisekisa isazisi sakho "kwinqanaba elifanelekileyo lokuqiniseka" ngokuqinisekisa ubuncinci idatha ezimbini amanqaku osinike wona ngaphambili kwaye esizimisele ukuwathembela ngenjongo yokuqinisekisa izazisi.
Kwizicelo zokufikelela kumaqhekeza athile eeNkcukacha zaBantu okanye kwezicelo zokucima iiNkcukacha zaBantu ezibuthathaka kwaye zibeka umngcipheko wenzakalo ngokususwa okungagunyaziswanga, siya kuqinisekisa ubuwena "kwinqanaba eliphezulu lokuqiniseka" ngokuqinisekisa ubuncinci amaqhekeza amathathu Iinkcukacha zobuqu ezazinikwe thina ngaphambili kwaye esizimisele ukuba zithembeke kwinjongo yokuqinisekisa izazisi. Ukongeza, uya kucelwa ukuba ungenise isibhengezo esisayiniweyo phantsi kwesigwebo sobuxoki esichaza ukuba ungulowo ufunwa ngeenkcukacha zakhe.
Ukuba ufaka isicelo egameni lomhlali waseCalifornia, nceda ungenise isicelo ngenye yeendlela ezichongiweyo ezixoxwe ngasentla. Emva kokungenisa isicelo, siyakufuna ulwazi olongezelelekileyo ukuqinisekisa igunya lakho lokwenza egameni lomhlali waseCalifornia.
Khanyisa uMthetho wokuKhanya
Singabhengeza iinkcukacha zakho kubantu besithathu ukuba bathengise ngokuthe ngqo iimveliso kunye neenkonzo zabo kuwe. Ukuba ungumhlali waseCalifornia, iKhowudi yaseKhaya yaseCalifornia § 1798.83 ikuvumela ukuba ucele ulwazi malunga nolwazi lomntu oluchazwe kunyaka wekhalenda ongaphambili kunye nokuchazwa kwabantu besithathu. Ukwenza isicelo esinjalo, nceda uthumele i-imeyile ku [imeyile ikhuselwe] kunye nomxholo othi "Khanyisa iSicelo sokuKhanya".
Sizimisele ukuqinisekisa ukuba lo mgaqo-nkqubo wabucala uyafikeleleka kubantu abakhubazekileyo. Ukuba unqwenela ukufikelela kuMgaqo-nkqubo wabucala ngenye indlela, nceda unxibelelane nathi njengoko kuchaziwe apha ngasentla phantsi kwecandelo lokuNxibelelana nathi.
Singahlaziya esi Saziso sabucala amaxesha ngamaxesha. Siza kukwazisa ngalo naluphi na utshintsho olunje, kubandakanya ukuba luya kuqala nini ukusebenza, ngokuhlaziya umhla wokugqibela "ohlaziyiweyo" okanye njengoko kufunwa ngumthetho ofanelekileyo.